घट्यो तरकारीको मूल्य, कुनको कति ? हेर्नुहोस् Canada Nepal
घट्यो तरकारीको मूल्य, कुनको कति ? हेर्नुहोस्
काठमाडौँ - मंगलबार नेपाली बजारमा केही तरकारीको मूल्य घटबढ भएको छ । पछिल्लो समय केही तरकारीको मूल्य घट्न थालेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका अनुसार अहिले प्याजको थोक मूल्य किलोको ६० देखि ६५ रुपैया रहेको छ ।
त्यस्तै आज गोलभेडाको मूल्य किलोको १५ देखि २० रुपैया, आलु किलोको २५ देखि ३० रुपैया, फर्सी किलोको २० देखि २५, मुला किलोको ३५ देखि ४५, भेण्टा किलोको ५० देखि ६०, गाजर किलोको ३० देखि ४०, बन्दा किलोको १२ देखि १५ रुपैया र काउली किलोको २५ देखि ३० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै घिउ सिमि किलोको ५० देखि ६०, भिण्डी किलोको ११० देखि १२०, लौका किलोको ५० देखि ६०, बरेला किलोको ४० देखि ५० र रायोको साग २० देखि ३० मा किनबेच भइरहेको छ ।
फाल्गुण १८, २०७७ मंगलवार ०८:३६:३४ बजे : प्रकाशित